Tanora · Desambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Desambra, 2019
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Desambra, 2019
‘Te hiaina izahay': an-tapitrisany ireo Siriana ampijalian'ny hanoanana sy ny hetaheta ao Yarmouk natao fahirano
Syria25 Desambra 2019
Nampiantrano Palestiniana mpitsoaponenana 160.000 ny tobin'i Yarmouk taloha. Ankehitriny, 18.000 sisa no mipetraka ao amin'ilay toby natao fahirano. Tapaka ny rano, mahavery fanantenana ny toedraharaha iainan'izy ireo.
Diabe iray mba hanomezana aina indray an'ireo sendikan'ny mpianatra ao Pakistana
Azia Atsimo24 Desambra 2019
Tsy marin-toerana ireo fepetra ara-tsosialy sy ara-politika ary ara-toekarena ao Pakistana izay hery manosika an'ireo mpianatra hanomana ity diabe ity mba hitakiana ny famelomana indray an'ireo fikambanan'ny mpianatra.
Mozambika23 Desambra 2019
Delegasiona politika avy amin'ny antoko Demokrasia Vaovao no nosamborina satria voampanga ho nitondra fanomezan-dalana hosoka.
Tchad: Fikambanan'ireo mpitantara angano “titimé titimé” , manampy ny ankizy handray fitenenana
Afrika Mainty17 Desambra 2019
Katsahan'ilay fikambanana mpitantara "titimé titimé" ny hampianatra ny ankizy handray fitenenena imasombahoaka ao Tchad
Zazavavy 11 taona nanomboka fanangonantsonia fitakiana ny fialàn'ny filoha meksikàna
Amerika Latina16 Desambra 2019
Zazavavy meksikàna iray, 11 taona, nanapaka hevitra ny hanao fanangonantsonia hitakiana ny fametraham-pialàn'ny filoham-pireneny, Enrique Peña Nieto, noho izy tsy niraharaha ny fanjavonan'ireo 43 mpiofana ho mpampianatra .
Chhaupadi, Fomban-drazana Nepaley manilika ny vehivavy mandritra ny fadim-bolana
Azia Atsimo13 Desambra 2019
Na dia nandràra ny chhaupadi aza ny Fitsarana Tampony Nepaley tamin'ny taona 2005, dia mbola miorim-paka mafy any amin'ireo tanàna be havoana saro-dalana izany.
Miavo-tena mba hiangana ny gazety iray ao Myanmar amin'ny fiteny Mon rehefa nitolona 20 taona
Azia Atsinanana10 Desambra 2019
Mitolona hatrany mba hanoka-baravarana ny gazety Guiding Star, loharanom-baovao iray lehibe ho an'ny vondrompoko Mon, rehefa lasa nirona any amin'ny nomerika ny vaovao ary mihena isa ny mpiteny Mon.
Fifanenàna amin'ny devoly, anjely ary olo-masina eny amin'ny araben'ny Repoblika Tsheky
Eoropa Afovoany & Atsinanana07 Desambra 2019
Feno karazam-piantsehatra tsy fahita firy ny arabe sy ny kianjan'ny Repoblika Tsheky tamin'ny takarivan'ny 5 desambra: devoly, anjely ary olo-masina manao satroka lava sy avo.